I-China Climbing Wall Production kanye neFektri | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
Imbalwa imidlalo ehlukile njengokukhuphuka kwamatshe, ukuqeqesha yonke imisipha nokuguquguquka emzimbeni wakho, nomkhuba wokucabanga njalo ngaphambi kwesinyathelo sakho esilandelayo. Kepha ingxenye enhle kakhulu ukuthi noma ubani uqala ngokwemvelo, evikelwe ngezintambo eziqeqeshiwe, awudingi ngisho nokuqeqeshwa ukuze uzijabulise.
Izindonga ezijabulisayo ziyizindonga ezisebenzayo zokugibela ezibandakanya izingane kanye nabantu abadala enseleleni yokukhuphuka kanye nobumnandi bokudlala. Imibalabala futhi inamandla, iletha ababambiqhaza ezweni lezinqaba zangezikhathi zangaphansi ezikhuphukayo, ama-labyrinths, ama-beanstalks, ama-spider webs, ama-chimims amnyama nokunye okuningi. Ukunyuka kukhula umuzwa wokulinganisela, ukucaca kanye nesibindi, kepha ingxenye enhle kunazo zonke ukuthi kwenzeka ngokwemvelo kuwo wonke umuntu. Iqembu ngemuva kwe-Fun Walls lihlanganise lezi zinzuzo nokukhula kwendawo ekhuphukayo emhlabeni wonke, futhi yahlela uchungechunge lwezinselelo ezisebenzisanayo. Bakhe ukuheha okujabulisayo okubandakanya ukuzijabulisa okusebenzayo futhi okuheha umphakathi obanzi kakhulu ngokungadingi amakhono noma ukuqeqeshwa okukhethekile.
Izindonga zokukhuphuka zikaHaiber ziyizindonga ezisebenzayo zokugibela ezibandakanya izingane kanye nabantu abadala enseleleni yokukhuphuka kanye nobumnandi bokudlala. Imibalabala futhi inamandla, iletha ababambiqhaza ezweni lezinqaba zangezikhathi zangaphansi ezikhuphukayo, ama-labyrinths, ama-beanstalks, ama-spider webs, ama-chimims amnyama nokunye okuningi.
Izindonga Zokwenyuka ze-3D
Izindonga zethu Zokukhuphuka ze-3D zithatha ukukhuphukela ezingeni elisha lonke. Ngezinto ezisebenzayo ezinjengezibani ze-LED, izibambo ezihambayo, izikhathi zesikhathi, amafindo nezinkinobho, udonga ngalunye lwe-premium lubanga umthamo owengeziwe wenjabulo!
Ukusebenzisana nokuzilolisisa kwezinto
Izinto zabadlali abaningi
Izindonga Zemidwebo Yekhathuni
Swinging Fun Izindonga
Esedlule: Inkambo Yezintambo
Olandelayo: I-Big FEC-001
1.Vikela iBlue Belay
IZWE LASEKHULUMA I-AUTO BELAY
Thatha imoto esetshenziswe kakhulu futhi ethembekile emhlabeni wonke, engeza umthamo owengeziwe wesivinini, bese uthola iTRAYENSI SPEED Auto Belay.
Inikeza ukuthembeka okufanayo nedumela lekhwalithi njengeTREKHAYA Auto Belay kodwa yenzelwe ngqo imincintiswano nokukhula ngesivinini esikhulu. Ijubane lokubuyisela emuva lishesha ngokwanele ukuba likhuphuke ngisho nabakhuphuka ngejubane elite lomhlaba, futhi ukubopha kwethu amandla kazibuthe kuhlinzeka ngemvelaphi evamile, emnene yokuthi i-TRANETUE idume ngayo.
UKUQHAWA KWEMAGNETIC YAKHO
Kuyinto efanayo ene-copyright eddy yamanje enobunikazi obumele bukholwe abantu abathandanayo ngenxa yemvelaphi emnene.
ISELULEKILE KANYE NOKUKHANYA KAKHULU
I-Eddy yamazibuthe yamanje ayimfashini futhi ayinazo izingxenye zokuzidela ohlelweni lwe-braking, ngakho-ke amadivaysi ethu athembekile ngokweqile futhi aphansi.
I-TRANETUE SPEED Auto Belay ithatha imizuzwana engu-2.7 odongeni oluyi-10m nemizuzwana engu-3,5 ngodonga oluyi-15m, oluzodlula amazinga e-IFSC futhi lushesha ngokwanele amarekhodi omhlaba nawesikhathi esizayo.
UKUGUQUKA KAKHULU KWEMISEBENZI YOKUGCINA
Amarobhothi emoto weTREKHOLIKI ahlanganisa ububanzi obubanzi besisindo yanoma iyiphi idivayisi emakethe, ukusuka ku-10 kuye ku-150 kg (22-330 lbs).
Ngezindinganiso ze-IFSC, iTRocraticUE SPEED Auto Belay isebenzisa amandla amancane konyukayo, ngakho-ke imiphumela yonke ingeyakho.
Ubukhulu: 37 x 33 x 23 cm (15 x 13 x 9 in)
Isisindo Sedivayisi: 18.5 kg (40.8 lbs)
Izinga Lokusebenza Elilinganiselwe: 10 kuya ku-150 kg (22 kuya ku-330 lbs)
Ijubane Elikhulu Lokwehla: 2 m / s
Isikhathi Sokubuyiselwa (15m): 3.5 sec
I-GT Sit imele igxathu phambili induduzo yabasebenzi bezintambo. I-harness yasungulwa kulandela ukutholwa kohlelo lwethu lokucwaninga lwe-SOSPESI olwasinikeza ukuqonda okusha ngokuxhamazela okwamiswa. Ukuxhumana okuyisisekelo phakathi kwebhande okhalweni kanye namalike womlenze kwenza i-GT Hlale kahle phakathi kokumiswa naphansi. I-padding isebenzisa ubukhulu obukhulu nokuqina ukuze inikeze inani elifanele lokusekelwa nenduduzo kuyo yonke ingxenye yomzimba. Isinamathiseli se-ventral okunamathiselwe sinezici ezimbili, esisodwa sokunamathisa isihenqo sesifuba kanye ne-ascender yesifuba kanti enye yokufakela izimbotshana, amakhabethe nezinye izinto zokusebenza. I-Pats ye-patents ezenzakalelayo enobumba emilenzeni yomlenze.
Amaphoyinti amane wokunamathisela i-aluminium alloy: i-1 ventral yokumiswa, uhlangothi lwe-2 lokubeka isikhundla, ne-1 emuva.
Iklanyelwe ukusetshenziselwa ihlanganiswe ne-GT Chest, enamaphoyinti amabili wokunamathiselwa (ngaphambili elilodwa nelinye emuva), ukuthola amahhashi okubanjwa komzimba ogcwele.
(Kala nge-CLOTHING ON [aka-Cover Cover / IJacket] Hhayi izilinganiso zakho zokugqoka)
Ubukhulu: 1 / SL
Usayizi okhalweni: 80-120cm (31.5 - 47.2 amayintshi)
Usayizi womlenze: 50-65m (19.7 - 25.6 amayintshi)
Izitifiketi: EN 358 EN 813 (NO ANSI)
Isisindo: 1200 g (2.65 amakhilogremu)